Saddex Markab oo sida cunto , daawo iyo Shidaal ayaa......
Qeyla dhaantii Abaarihii ka dhacay gobolada soomaaliya in tooda badan ayaa gaarey haydaha samafalka caalamiga iyo kuwa bixiya deeqaha, WFP Soomaaliya waxay u soo dirtay 3-markab oo sida cunto daawo iyo shidaal gobolada sool, sanaag iyo toghdeer.
Abaaraha gobolada ay ka dhaceen ayaa kala ah Galgaduud, Mudug, Bari, Nugaal, Sool, sanaag, togdheer, bay ,bakool ,jubba dhexe iyo gobolada gaar.
Wasiirka cadaalada iyo diinta Dawlad Goboldeedka Puntuland Muddane Axmed Cawad Ashara ayaa sheegay in qoraal ka hadlaya abaaraha gobolada Soomaaliya oo dhan u direen qaramada midoobey la taliyaha arrimaha siyaasada iyo deeqaha Xoghayaha guud Dr.Kiemriene iyo dhamaan Caalamka oo idil.
Muddane Xasharo ayaa sheegay in hayada WFP soo gaarsiisay 3-markab oo sida Cunto, Daawo iyo shidaal,3-markab ayaa waxay 19-bisham ku soo xirteen Dekada Boosaaso, Deeqdaasi oo loogu talagaley in la gaarsiiyo Gobolada Sool ,sanaag iyo togdheer.
Waxa kaloo uu sheegay masuulka in ay kuwa kale sugayaan in kastoo ay goboladaasi hadda roob ka da`een, laakiin ay diiftii abaaruhu weli kajiraan maadaama ay xoolo badani le'deen, ayna abaartu raad weyn ku reebtay degaanadaas.